हिमाल खबरपत्रिका | सहनशील शहर
दरबारमार्ग वा ठमेलका रेष्टुरेण्टहरूमा खानपिन गर्दै अथवा पचासौं हजारको ल्यापटपमा काठमाडौंको बैगुन बखान्नेहरूप्रति बोल्ने भए यो शहरको धारणा कस्तो हुँदो हो !
'काठमाडौं शहर हेर्दा लाग्छ रहर, गिद्धै गिद्धको शहर! दिमाग चला पासा, पैसा खस्छ बरर ...!'
गत वर्ष खुब चलेको नेपाली चलचित्र 'लूट' का पात्र हाकु कालेले काठमाडौंलाई यसरी गरेको व्याख्यालाई दर्शकले औधी मन पराए। सार्वजनिक बसमा होस् या काठमाडौंमा जोडेको निजी कारमा, अस्ति दशैं मनाउन घर जाँदाजाँदै पनि धेरै मान्छेले यो शहरलाई सकेको गाली गरे। दशैंपछि उनीहरू फेरि 'यो स्वार्थी, पीडक शहर' भन्दै काठमाडौं छिरे। फेसबुकका भित्ता र ट्वीटरको टाइमलाइनहरूमा छाएका त्यस्ता स्टाटस्मा अझै पनि 'लाइक' को वर्षा भइरहेको छ।
बाहिरका त बाहिरिया भइहाले, यहींकाहरू पनि काठमाडौंसँग निकै रिसाएका देखिन्छन्। उनीहरू यहाँबाट बाहिरिंदा 'आनन्द' अनुभव गर्छन् र भित्रिंदा 'दिक्क' मान्छन्। लाग्छ, जो पनि काठमाडौंलाई एकचरण गाली नगरी ननिदाउने भएका छन्। यहींका, बाहिरका जोसुकै हुन् हरेकबाट दुत्कारिनु काठमाडौंको नियति भएको छ। यो पंक्तिकारले फेसबुकमा काठमाडौंबारे तपाईंको मनमा के छ भनेर लेख्दा आएका २६ प्रतिक्रियामध्ये जम्मा दुइटा सकारात्मक थिए। काठमाडौंप्रतिको गुनासो, इर्ष्या वा रीस नयाँ होइन, जुन अहिले यो ढंगले व्यक्त भइरहेको छ। काठमाडौंलाई बद्नाम गरिएको साहित्य, चलचित्र हिट हुने संभावना बढेको बढ्यै छ।